ဟီလာရီရဲ့ ဂျက်လေယာဉ် ဘယ်လို အစွမ်းထက်သလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဟီလာရီရဲ့ ဂျက်လေယာဉ် ဘယ်လို အစွမ်းထက်သလဲ
ဟီလာရီရဲ့ ဂျက်လေယာဉ် ဘယ်လို အစွမ်းထက်သလဲ
Posted by chatsu on Dec 4, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
C-40B ဂျက်လေယာဉ်ဟာ အလျား ပေ ၁၁ဝနဲ့ လေးလက်မရှိပီး အမြင့် ၄၁ပေနဲ့ ၂ လက်မ ရှိပါတယ်။ GE-CFM 56-7B27 အမျိုးအစား အင်ဂျင် ၂ လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး ရေမိုင် ၄၆၀ဝ ထိ ဆီမဖြည့်ဘဲ ဆက်တိုက် ပျံနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မူလအသုံးပြုဖို့ ရည်ရွယ်ချက်က တိုက်ပွဲဝင်မဲ့ အမေရိကန် တပ်မှူးတွေ အမေရိကန်အစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေကို သွားလိုရာ ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးကို သက်တောင့်သက်သာ စိတ်ချလက်ချ သယ်ပို့ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်ဟာ အရပ်သုံး ဘိုးရင်းဂျက်လေယာဉ် ၇၃၇-၇၀ဝ ကို စစ်သုံးဖြစ်အောင် အမေရိကန်လေတပ်အတွက် ပြုပြင်ထားတဲ့ အထူးဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ကို အမေရိကန် ထိပ်တန်းစစ်အရာရှိတွေ အမေရိကန်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက် မိုးပျံရုံးခန်း ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟီလာရီကလင်တန် စီးလာတဲ့ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ပေါ်မှာ အချက်အလက်တွေ ဗီဒီယိုတွေ ပေးပို့ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ အမြန်နှုန်းကောင်းတဲ့ အင်တာနက်စနစ်တပ်ဆင်ထားသလို အသံနဲ့အချက်အလက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကလဲ ရှင်းလင်းကြည်လင်ပြီး လုံခြုံမှုရှိတဲ့ စနစ်မျိုးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်ကို အသုံးပြုတဲ့ တိုက်ပွဲဝင် အမေရိကန်တပ်မှူးတွေအနေနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်က အင်တာနက်စနစ်၊ LAN အင်တာနက် ကွန်ယက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းစနစ်၊ ဂြိုလ်တုစနစ်တွေ၊ တီဗွီမော်နီတာတွေ၊ ဖက်စ်ပို့တဲ့စက်တွေ မိတ္တူကူးစက်တွေကိုုသုံးပီး ကမ္ဘာ့ဘယ်ဒေသမှာမဆို စစ်ဆင်ရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဟီလာရီကလင်တန် စီးလာတဲ့ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက် လက်နက်တပ်ဆင်ဖို့ လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
C-40B ဂျက်လေယာဉ်ရဲ့ လေယာဉ်မှူး ခေါင်းခန်းကိုကြည့်ရင်လဲ
-ဂျီပီအက်စ်စနစ်နဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ လေယာဉ်ပျံသန်းမှု ထိန်းချုပ်ရေး ကွန်ပြူတာစနစ်
-နောင် အနာဂတ်မှာသုံးမဲ့ ဂြျိလ်တုဆက်သွယ်ရေးစနစ်အခြေခံ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (GATM/FANS) နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ လေယာဉ်မောင်းစနစ်
-လေယာဉ်တွေ လေထဲပျံနေစဉ် တစင်းနဲ့တစင်း ပုံမှန်ဒေါင်လိုက်အမြင့်ကို လျှော့ချနိုင်တဲ့စနစ်
– လေကြောင်းသတိပေးချက်နဲ့ လေယာဉ်ချင်းမတိုက်မိအောင် ရှောင်နိုင်တဲ့စနစ်-၂
-Head-up Display (HUD) စနစ်လို့ခေါ်တဲ့ လေယာဉ်မှူးမျက်လုံးတည့်တည့်မြင်ကွင်းထဲမှာ ဒိုးယိုးပေါက်မြင်နေရတဲ့ ဒိုင်ခွက်စနစ်စတဲ့ ခေတ်မီ စနစ်တွေ တပ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဉ်ထဲမှာလဲ လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေ နားနေခန်း၊ အိပ်စင်တွေ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်သည်တော်တွေအတွက် အခန်း၊ စားဖိုခန်း နှစ်ခု၊ ရုံးခန်းစားပွဲတွေပါတဲ့ business class ထိုင်ခုံတွေ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလို စစ်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံမျိုးကို သွားတဲ့အခါမှာသာ C-40B ဂျက်လေယာဉ်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က သုံးပေမဲ့ ကဒတ်ဖီကို ဖမ်းမိဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ကာလ မြေပြင်ပစ်ခတ်မှုတွေ စိုးရိမ်ရတဲ့ လစ်ဗျားကို သွားတုံးကတော့ လုံခြုံရေးစနစ် ပိုကောင်းမွန်တဲ့ စစ်သုံး C-17 ဂလုပ်မာစတာ-၃ အမျိုးအစား ဧရာမ ဘိုးရင်းလေယာဉ်ကြီးနဲ့ သွားခဲ့ပါတယ်။အထုူးသဖြင့် စစ်တလင်းဖြစ်နေတဲ့ လစ်ဗျားလိုနိုင်ငံမျိုးက ပစ်နိုင်တဲ့ မြေပြင်ကနေ ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်တွေ အသေးစားလက်နက်တွေရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် C-17 ဂျက်လေယာဉ်ဟာ ကိုယ်ထည်ကြီးမားပေမဲ့ လေထဲကို မတ်စောက်တဲ့ ဒီဂရီအနေအထားမျိုးနဲ့ အတက်အဆင်းလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
C-17 ဂျက်လေယာဉ် အတက်အဆင်းလုပ်နေချိန်မှာ လေယာဉ်မောင်းတဲ့တာဝန်မရှိတဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေက လေယာဉ်ကို ပခုံးထမ်းဒုံးကျည်နဲ့ပစ်သလားဆိုတာ လေယာဉ် ပြတင်းပေါက်ကနေ ကြည့်နေရပါတယ်။ ပခုံးထမ်း ဒုံးကျည်နဲ့ ပစ်တာမြင်ပီဆိုတာနဲ့ လေယာဉ်မှူးတွေကနေ အပူဓါတ်ပါတဲ့ မီးကျည်သေနတ်ကို တည်ကြက်အနေနဲ့ ပစ်လွှတ်ပီး ကာကွယ်ရပါတယ်။
ဂျက်လေယာဉ် အင်ဂျင်ကထွက်တဲ့ မီးခိုးအပူဓါတ်ကို နောက်ယောင်ခံတက်လာတဲ့ မြေပြင်ကပစ်တဲ့ ပခုံးထမ်း ဒုံးကျည်ဟာ လေယာဉ်မှူးတွေ ပစ်ချလိုက်တဲ့ အပူဓါတ် မီးကျည်နောက်ကို ပစ်မှတ်ပြောင်း လိုက်သွားလေ့ရှိတဲ့အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး စီးတဲ့ လေယာဉ် ဒုံးကျည်ရန်က လွှတ်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
chat su has written 34 post in this Website..
View all posts by chatsu →
မတင် တက် တင်တက်နဲ့ တင်လိုက်တာ ကလင်တန်ပုံ ကျန်သွားတယ်။
ကိုချက်စူ ရေ ခင်မင်စွာဖြင့် မန် ့လိုက်ပါတယ်
ရွာထဲမှာ ပို ့စ်တင်မယ် ဆိုရင် ၊ ရွာထဲက လူတွေ တင်တဲ့ ပို ့စ်လေးတွေ လည်း ဖတ်ကြည့်ပါဦးနော်
အဲဒါ မနေ ့က ကိုသစ်မင်း ဦးဦးဖျားဖျားတင်ခဲ့တာပါ
ဟုတ်တယ် အဲဒါပြောမလို့ ဆရာသစ်မင်းရေးတဲ့ စာတွေက facebook မှာရော တခြား ဘလော့တွေမှာပါ ပွနေသဗျ … သူတော့ မူပိုင်ခွင့်အရ ဘယ်လောက်ရသလဲ မသိဘူး .. နောက်ဆုံး ဂဇက်မှာပါ တကျော့ပြန် ဝင်လာတဲ့ အထိပဲ ..။
ချက်စူရေ ရွာသားအသစ်မို့ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်နော…
နောက်ပိုင်း ရွာအထာတွေကို နပ်သွားမှာပါ…။
thank you။တင်မလို့ဟာ ကူးထားတာကြာပြီ။လိုင်းမကောင်းလို့ page တောင်မတက်ဘူး။
post ကို ပြန်ဖျက်လို့ရလား။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မတင်သေးခင် ပြန်ကြည့်လို့ရလား။အခုမှ သုံးကြည့်နေတာပါ။မှားတာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ရွာသားတို့ရေ………………………………
ဖျက်စရာ မလိုပါဘူး ကိုချက်စူ ရာ
အားလုံး က ကိုချက်စူ ပို ့စ်ကို ဖတ်နေကြပါတယ်နော်
ကူးပြီးတင်တာတွေ ကို Credit-ခရက်ဒစ် သေသေချာချာလေးပေးပေါ့.။ရွာ့အတွက်ပါ၊။
ကိုယ်ပိုင်နဲ့ ကူးတာကိုကွဲပြားစွာ တင်စေချင်ပါတယ်.ဗျာ။
ကျုပ် ရေးတဲ့ စာတွေ ခွင့်ပြုချက် မရပဲ FB နဲ့Blog တွေမှာ လျှောက်တင်ရင်တော့
အီးဒုံး ထမိန်ကို ငှားပြီး အလံထူဘလိုက်မယ် ဘာမှတ်လဲ ။
အဲဒီ ပြသာနာကလဲ ….ဟီလာရီ သူ ့ဘာသူ ဘာကြီး စီးပြီး လာလာပေါ့နော ။
သိကြာမင်းတောင် စီးချင်တဲ့ အကောင်စီးပြီးလာဒါဂို ။
ငါ့လခွီး အလုပ်မရှိ သန်းရှာနေသဂိုး ။
FB မှာ ဒီလို ချီးထုတ်ကျကြတယ် ။
ခင် ရ တာ နာ = အမေရိကန်နုိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြိး စီးတဲ့လေယာဉ်က AirForce One မဟုုတ်ပါ။
AirForce One က အမေရိကန်သမတမှတပါး အခြား မည်သူမျှ စီးခွင့်မရှိပါ။ ကလင်တန်စီးတာ C-17
အမျိုးအစား လေယာဉ်ဖြစ်ပီး အထဲမှာ ရုုံးခန်းတွေ စာကြည့်ခန်းတွေ နားနေခန်းတွေပါတဲ့
Kalvin Alexander = လေယာဉ်အမြီးမှာ နံပါတ်ပါတယ် ၈၀၀၀၂ တဲ့။ အဲဒီနံပါတ်ကို ဂူဂယ်မှာ
ရိုက်ထည့်လိုက် 80002 USAF ဆိုပြီးတော့ .. ဘာလေယာဉ်လဲဆိုတာ ထွက်လာမယ်။ ချင့်ယုံကြပေါ့ဗျာ။
မခင်ရတနာရဲ့ page မှာ မဟုတ်ဘူး လွဲနေတယ်နော်လို့ သွားပြောမိတာ comment ကို ဖျက်ချပြီး လူကို
Thiha Kyaw Zaw ‎ = @ ခင် ရတနာ Who told you that’s C 17?
ကသစ်မင်း တော့ မူရင်း ရေးသူတွေ ကို Credit ပေးထားတယ်။
ကောင်မလေး အဲဒါ ဘာဖရစ်စ်စ်စ်စ်တာလဲ
98-0002 USAF United States Air Force Boeing VC-32A (757-2G4) –
Construction Number (MSN) 29026
Line Number 787
Aircraft Type Boeing VC-32A (757-2G4)
First Flight 13-04-1998
Age 13.7 Years
Test registration N3519M
Airframe Status Active
၈၀၀၀၂ ဆိုတာ တွေ့လိုက်တော့ Airforce2မှန်းတော့ သိလိုက်တယ် .
ဒါဆို နေပြည်တော် လေယာဉ်ကွင်း 757 ပါဆင်းနိုင်တာပေါ့နော် ။